Akohlulwanga kudidi- Umbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
Umbutho wamaZiko okuBhala waMazwe ngaMazwe
Imithetho yedolophu noMgaqo-siseko
IZiko lasehlotyeni le-IWCA
Inkomfa yoNyaka ye-IWCA
IVeki yamaZiko okuBhala yaMazwe ngaMazwe
IWCA Intsebenziswano kwi-Intanethi
Ugcino lweziganeko zamva nje
Ijenali yeZiko lokuBhala
Ukujongwa kwakhona koontanga
Izibonelelo kunye neeBhaso
Amabhaso eeNkokeli zeXesha elizayo
Ibhaso leNqaku eliBalaseleyo le-IWCA
Ibhaso leNcwadi eBalaseleyo ye-IWCA
UMuriel Harris oBalaseleyo kwiMbasa yeNkonzo
Izibonelelo zoPhando ze-IWCA
Isibonelelo soPhando ngoBen Rafoth
Isibonelelo sokuXhotyiswa kwe-IWCA
Izibonelelo zehambo ze-IWCA
Inkqubo yoMcebisi yoMcebisi
Umxhasi wemicimbi ye-IWCA
Disemba 8, 2020 Elisabeth Akohlulwanga
Ukubhiyozela uMhlala-phantsi kunye nokufezekiswa kowayesakuba nguMongameli we-IWCA, uJon Olson
[Icatshulwe ku inqaku elipheleleyo nguNicolette Hylan-King]
Ekupheleni kukaDisemba, uJon Olson uza kuwugqiba umsebenzi wakhe weminyaka engama-23 njengentshatsheli yokufundisa ngoontanga ngokubhala ePenn State. Njengoprofesa onxulumene nokubhala kwiSebe lesiNgesi kunye nomphengululi kwindawo yokuhlala yokubhala kunye nokunxibelelana kwiPenn State Learning, u-Olson ucebise izizukulwana zabaqeqeshi bezontanga ngokubhala kwaye wabumba i-theory kunye nokusebenza okukhokela amaziko okubhala ePenn State.
Igalelo lika-Olson kwicandelo lolawulo lwenkqubo yokubhala kunye nokufundiswa koontanga ngokubhaliweyo kuye kwaqatshelwa ngokuqeshwa kunye namabhaso. Usebenze njengomongameli we-International Writing Centres Association ukusuka ngo-2003-05. Ufumene iBhaso likaRon Maxwell leNCPTW lokuKhokela ngokuBalaseleyo ekuKhuthazeni iZenzo eziDibeneyo zokuFunda koTitshala abaFundisayo ekuBhaleni (ngo-2008) kunye noMbutho weZiko eliBhalayo loMbutho weMuriel Harris Award Award (2020).
Upapasho lweZiko lokuBhala eliXhaswa yi-IWCA
Yenza iwebhusayithi okanye ibhlog ku-WordPress.com